स्काई लोक आईडल सिजन -२ अडिसन आज देखि सुरु, अबको ३ महिना समय अवधि चल्ने
केशब गौतम,गुल्मी।स्काई लोक आईडल सिजन -२ अडिसन आज देखि सुरु भएको छ।
स्काई लोक आईडल सिजन १ को सफलतापछि पुन: सिजन-२ पनि आज देखि सुरु भएको छ ।केही समय अघि दोश्रो सिजन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको "स्काई लोक आइडल" आज गुल्मी जिल्ला कै पहिलो सामुदायिक रेडियो स्काई ९०.४ मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पुस्पाञ्जली ९७.४ मेगाहर्जबाट आज देखि प्रत्येक शनिबार हुने गरि अडिसन सञ्चालनमा आएको हो। जसमा आज पहिलो दिन ३० जना सहभागिता बनाइएको छ। देशका विभिन्न जिल्लाका कुना कुनामा बसेर आफ्नो गायन कलालाई तिखार्दै बसेकाहरुको लागि यो निकै ठूलो अवसर र स्थान बनेर आएको छ ।
पहिलो सिजनमा विभिन्न जिल्लाबाट करिब १५५ सहभागीता भइ ४ जना उत्कृष्ट जादुमय स्वर भएकाहरूले मौका पाएका थिए भने दोश्रो सिजनमा पनि देशका विभिन्न जिल्लाबाट जादुमय स्वरहरु छानिने छन् ।
आजबाट सुरु भएको अडिसन दोश्रो सिजनमा तपाईको सहभागिताहरुको निकै उत्साहजनक हुनेछ । स्काई लोक आइडलको दोश्रो सिजनलाई पनि पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय मिडिया वि.जी. डिजिटल, वि.आर. मिडियाले प्रथम ,आज्ञा क्रियशनले दोस्रो र लोक गायक छविलाल कौशलले तेस्रो पुरस्कार प्रायोजन गर्नु भएको छ।
यदि अझै पनि यो स्काई लोक आइडल सिजन -२ लाई सभ्य र भब्य बनाउन चाहन्छु र प्रायोजक बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो स्थान पनि अझै खालि नै रहेको बताइएको छ।
स्काई लोक आइडल सिजन -२ मा सहभागि भई प्रथम हुनेले अडियो भिडियो, दोस्रो हुनेले अडियो तथा तेस्रो हुनेले नगद रु. १०,०००/- पाउने भएका छन् । स्काई लोक आडलको पहिलो सिजनले राम्रो सफलता पाए संगै दोस्रो सिजनले पनि राम्रो सफलता हासिल गर्ने छ। स्मरण रहोस् यो स्काई लोक आइडल सिजन -२ अबको ३ महिना समय अवधि भर चल्ने छ।